I-China Toy box yezingane ipulatifomu lephepha lekhadibhodi elinesibambo Umkhiqizi nomhlinzeki | I-Huaguang
Ibhokisi lamathoyizi lesikhwama sephepha lesikhadibhodi sezingane ngesibambo
Iphepha Lesikhwama Esiphethe
Usayizi: 25 * 18 * 8.5cm
Est. Isikhathi (izinsuku) 7 15 Kuxoxiswane
Leli phepha lesikhwama lisetshenziselwa ukugoqa izipho zezingane noma ukuhlela amathoyizi amancane ezingane. Ithoni yalo eyinhloko iluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe, ukwakheka kwephethini lamachashaza egagasi, kubukeka kuhlanzekile, kukhululekile futhi kuhle, kulungele izingane. Futhi ukufaniswa kombala okunjalo, angikwazi ukuzibamba kodwa ngifuna ukusebenzisa leli phepha lokuphatha ipotimende, kulezi zinto ezingenhla ezithinta ukuguqulwa kombala kwento ephrintiwe.
Phrinta kwinqubo yokuphrinta nokugcina, i-hue yayo, ukukhanya kwayo, ukugcwala kwayo kuvame ukushintsha, noma ngabe kuyinki ye-monochromatic, noma izinhlobo ezingaphezu kwezimbili zikayinki wombala, ngaphakathi nangaphandle kokusebenza, umbala ungaba mnyama, futhi ungakhanya. Izinga lokuphrinta lekhwalithi esezingeni eliphakeme yileli: iqoqo lemikhiqizo ngaphambi nangemva kombala wokukhanya omnyama ongaguquguquki, omibalabala, ngasikhathi sinye ukuhambisana nesampula lesigaba sombala omnyama nokukhanya okujulile kukayinki.
Uyinki ulula ukumelana nokushintsha kombala nokushintsha kombala
Uyinki ekukhanyeni kwelanga, umbala nokukhanya kwawo kuzohluka ngamazinga ahlukahlukene okushintsha, ukumelana ngokuphelele nokukhanya futhi akushintshi ithoni likayinki, ekukhanyeni kwelanga okuqinile, wonke umbala wenkini uzokhiqiza izinguquko ezahlukahlukene. Kunezinhlobo ezimbili zoshintsho.
Ukufiphala: ngaphansi kwesenzo selanga i-ultraviolet ray, ukumelana kokukhanya kukayinki kubi, kulahlekelwe umbala okhanyayo wangempela, umbala uba mpunga ophaphathekile. Uyinki wombala okhanyayo ikakhulukazi nokuphrinta kokusetha imibala emine lapho umbala ophuzi nobomvu imibala emibili isheshe isheshe, bese umbala we-cyan noyinki uncipha kancane.
Ukukhipha umbala: ngokungafani nokuphrinta kwe-inki emnyama, ukuguqulwa kombala ngaphansi kwesenzo selanga kumnyama, umbala nawo ushintshile, abantu bakubiza ngalolu shintsho ukushintsha kombala.
Ipuleti lokuphrinta le-Offsctdruckmasenten alikwazi ukuhlukaniswa nokumanzisa ingxenye engenalutho yepuleti, i-offsctdruckmasenten amanzi okuqala ngoyinki, nakanjani amanzi azobonakala emulsifying. Umbala we-ink emulsion uzoncipha, kepha, ngemuva kokuhwamuka kwamanzi kungabuyisa umbala wokuqala, ngakho-ke lapho amanzi eba maningi, inani le-emulsion elikhulu, lizodala ukushintsha kombala. Ngokuyinhloko, izinga lokumumethelwa kwe-inki ehluke ngokuphelele ndawonye, ​​isimo sokuguqulwa kombala sivelele ikakhulukazi.
Izakhiwo zephepha iphepha elibushelelezi
Ubushelelezi bephepha elingaphezulu nekhophi ebhaliwe inobuhlobo obuseduze, hhayi iphepha elibushelelezi livame ukudinga ingcindezi enkulu, ukuze yenze uyinki futhi inokuxhumana okuhle. Njengokuphrinta kukayinki we-inki, uketshezi, ukugcina inani elithile likayinki wefilimu, umfutho owandayo uvame ukwenza indawo esakazwayo ebhalwe ngamangqamuzana, ngasikhathi sinye, iphepha lifaka endaweni, kepha ukuxhumana okungaxakekile, okufana: iphepha eligcotshiwe kanye ne-newsprint ku imiphumela efanayo yokuphrinta kwepuleti efanayo inomehluko omkhulu, ngokusobala ingaqhathanisa umphumela wokuphrinta ohlukile.
Iphepha, futhi ubukhulu bomphumela wokumunca nokuphindaphindeka bunobudlelwano obuqondile, imvamisa kukhwalithi yokuphrinta yento kukhona amashidi wephepha, uma kutholakala inki, i-viscosity ephansi, iphepha lizomunca ukuxhumeka okungaphezulu kongqimba lwe-ink, uma i-wool stoma ububanzi obukhulu kunobubanzi bezinhlayiya zombala, khona-ke, ngisho nezingulube ziyaphefumula, ukugcwala kokushicilelwa kuyehla. Udinga ukukhulisa ubukhulu besendlalelo sikayinki ngokufanele. Kodwa-ke, ukukhulisa ukushuba kongqimba lukayinki, ngesikhathi sokufaka embossing kuzodala "ukusabalala", kuthinte umphumela wokushicilelwa kwekhophi. Ukutholakala kwephepha elincane, kungenza iningi lefilimu likayinki livele ebusweni bephepha, ukuze ungqimba lukayinki obhalwe phansi lube nokugcwala okuhle.
Ukutholakala kwephepha lokuvunyelwa kwephepha kukhulu, kuzokwenza ubungqimba bukayinki bube mncane, ama-pores angaphezulu kwephepha makhulu, kepha futhi enze ingxenye yezinhlayiya zombala zangena ngaphakathi ephepheni ngasikhathi sinye, ngakho-ke kukhona umqondo wombala. Kuze kube manje, ukusetshenziswa kwendawo enolaka, ukuthungwa okuxekethile kwephepha, noketshezi lweyinki nephepha elikhulu, ukunaka umbala.
I-pigment ayikwazi ukumelana nokushisa
Uyinki kwinqubo yokomisa, uyinki wokuphrinta wenjoloba osheshayo omile ikakhulukazi yi-conjunctiva - okomisa i-oxidation. Ukomiswa kwe-inki ye-offset ngaphambi kokuba kube nesigaba esinqunyiwe, i-ink oxidation polymerization iyindlela yokuphendula exothermic, ukomisa ngokushesha okukhulu kuzokhipha ukushisa okuningi, uma ukushisa kukhishwa kancane, ngeke kwenze umbala wokushisa we-pigment. Isibonelo: inki yombala wegolide iba mnyama futhi ilahlekelwe ukukhanya kwayo kwangempela.
Ngesikhathi sokuphrinta, amashidi wokuphrinta afakwa anqwabelana, ngoba abekwe kakhulu, ingxenye ephakathi nendawo yokuphrinta kwe-ink oxidation polymerization exothermic reaction, ukushisa akulula ukuthumela, ukushisa okuphezulu kakhulu engxenyeni emaphakathi yokushintshwa kombala .
Amafutha omile anomthelela omncane
Uyinki wombala ungowethoni epholile, ophuzi okhanyayo, oluhlaza okwesimaragidu, ichibi eliluhlaza okwesibhakabhaka nomunye uyinki wombala, ungasebenzisi uwoyela owomile obomvu, ngoba uwoyela owomile obomvu ngokwawo okunombala onsomi ojulile, uzothinta umbala winki okhanyayo.
Amafutha omile omhlophe avela amhlophe, kepha i-conjunctiva inombala onsundu ngokukhazimula ngemuva kwe-oxidation. Uma inani likawoyela omile omhlophe likhulu kakhulu, ukuphrinta kuzoba nsundu ngokuphuzi lapho somile, kuyilapho umbala woyinki omnyama njengoluhlaza okotshani, omnyama nonsomi onamafutha obomvu obomile ngeke uthinteke kakhulu.
I-inki ayimelane ne-alkali
Ukuphrinta iphepha le-PH value = 7, iphepha elingathathi hlangothi yilona elifanele kakhulu, izingulube ezijwayelekile ezenziwa yi-inki acid, i-alkaline ayiyinhle, i-organic pigments acid, i-alkaline ingcono, ikakhulukazi i-inki eluhlaza okwesibhakabhaka, i-inki eluhlaza okwesibhakabhaka izofiphala nge-alikhali. I-alkali medium yellow ngombala obomvu, i-electrochemical aluminium foil stamping, i-India izoba yigolide eliphuzi lasendulo ezintweni ezinama-alkaline, akukho gloss, iphepha le-alkaline elibuthakathaka ngaphezulu, okuvame ukuhlangana nalo ekuphrinteni okubopha ngemuva kokukhiqiza liqukethe okunamathiselwe kwe-alkaline, uma ukupakisha ukuphrinta komhlobiso umkhiqizo uyinto ene-alikhali efana nensipho, insipho, impuphu yokuwasha njalonjalo, bonke bafuna ukucubungula ukumelana kwe-alikhali, ukumelana nokwenziwa kwe-inkon ukusebenza.
Umthelela wemvelo yesitoreji
Imikhiqizo eminingi yokuphrinta yokugcina isikhathi eside, nakanjani izokhombisa into ephuzi, izizathu zezici ezimbalwa ezilandelayo.
I-fiber fiber iqukethe i-lignin nokuguqulwa kombala. Amaphephandaba aprintwe kuphepha lezindaba kungenzeka aphenduke abe phuzi futhi abe brittle.
Ukuphrinta kwe-Offset imibala emine yokuphrinta imibala yokuphrinta imibala, iningi elangeni, isimo sezulu, umoya nemvula, ukuguguleka kwangaphandle kokushisa okuphezulu, njalonjalo, ngoba i-pigment ayimelana nokukhanya, ukumelana nokushisa, nombala noma ukuphela.
Izici zokushintsha kombala ezintweni eziphrintiwe zihlukahlukene futhi awukho umkhiqizo ongenza konke. Njengalesi sikhwama sephepha, umbala waso ungashintsha ngokuhamba kwesikhathi. Kepha okungenani yinhle lapho siyisebenzisa.
Luhlala isikhathi eside futhi kulula ukuthwala.
Vimbela ukuthi ivulwe kalula ngenkathi ithwele
Inamandla amakhulu futhi ingabamba izinto eziningi.
Langaphambilini Ibhokisi lesipho eliyindilinga elenziwe ngokwezifiso nebhokisi lesethi esezingeni eliphakeme
Olandelayo: I-logo yangokwezifiso eyenziwe ngokwezifiso ye-Luxury Paper Jewellery Box Organiser enebhokisi le-Mirror Drawer Ring Earring Jewellery
Toy ibhokisi izingane amakhadibhodi iphepha ipotimende w ...